Last updated: Chivabvu. 20 2019 | 3 Maminitsi verenga
Pane mitemo apo kudanana? Chokwadi pane. Mujenya vavo, chaizvoizvo, asi vakawanda vavo vari tsika vakaumbwa uye vanogona dzinosiyana nyika kune dzimwe uye kubva rimwe boka redzinza kune vamwe. zvisinei, pane zvinhu mitemo kuti varambe kushanda pasi rose. Heano 10 mirayiro vakadzi vanofanira kuremekedza kana kudanana:
1. Return anodana ari rakakodzera nguva Zvokukurukurirana
Women kufanana nokutora nguva yavo isati kuwana kudzokera nemukomana anoita wazvose. Kana une kufarira kuti murume, wo, uchida kudzoka kudanwa kwake nenguva nenzira. Kunyange kana uchida kutamba nesimba kuwana, musaedza kuwana pamusoro 48 maawa muganhu pasina chikonzero chakanaka. Kuva kunze kweguta hakuchisiri musoro tsanangudzo. Munhu wose ane serura mazuva ano, kana anenge munhu wose.
2. Kudza Promises Your
Unogona kufunga kuti zviri nyore kuti vanhu kupfuura vakadzi yomusango kufambidzana kwemasango. Zvitende kana kwete, ichi hachisi chokwadi. Hazvisi nyore nguva dzose kuwana ushingi hwokukumbira mukadzi panze. Kana akaita izvozvo, uye iwe akati hungu, edza kuramba zvirongwa zvenyu. Usangoita kudana kukanzura munyika yapera. Aigona kuwana pfungwa hauna kuti zvikuru kupinda naye. tsime, zviri zvakakwana yakanaka kwete kuva, asi pakadai haufaniri kubvumirana pakutanga.
3. Ngaatore Kutungamirira
Izvi zvinoita ndachembera zvechinyakare iwe? Ungashamisika kuziva kuti zvinhu zvizhinji dzichiri kuitwa chakare nzira chikoro. Varume vakawanda vanonakidzwa ari muvhimi, Kanenge zvishoma. Regai pachako muvavhime, asi iye kubatsira kana zvichifanira nokumuendesa rworudyi anonongedzera.
Siyai nyaya iyi nokuda Chit dzevakurukuri pamwe neshamwari dzako dzechisikana! A zvokunwa pakati vasikana munhu zvikuru yakakodzera mamiriro ezvinhu kutaura Eks. Pasina kuva haavanzi payo, regai pachena zvose zvenyu muddied kare panguva Danho rokutanga ukama hwako.
5. Usazviomesera Focus uye achinyemwerera
Kunyemwerera unokosha kupfuura imwe savi pakati vanoumba. Inoita chiso chenyu ngachivhenekere uye rinoita zvaunokwanisa anoda kuona zvakanakisisa iwe. Paaiva musi, edza kuisa pfungwa dzako paari, uye kudzivisa kutendeukira musoro wako pashure vamwe vakomana, zvisinei sei kupisa vave. Teerera ari achiti chii, kuramba ziso kuonana, uye kuita. Ndicho mafungiro munhu taizotarisira. Kana uri inovava, kutsauswa, uye kusuruvara, aigona kukanganwa kuzodana mushure.
6. Usanwa yakawandisa
Muchadenga akadekara zvake uye mwero. Zvose sokuti kuti kushanda chete yakanaka. Unonzwa vanoedzwa kuti kuva cocktaileja kana magirazi mashomanana ewaini. regai! Hapana anoti imi havabvumirwi kubata zvinwiwa zvinodhaka. Just Usaita naro. Mugumisiro Varege kufanana seksikäs sezvo munofunga.
7. Usatarisa somunhu digger goridhe
Chii Unosarudza, kuwana soulmate yako, kana kwekanguva mari mabviro. Regai kuzvibata sokuti ari pamahombekombe yako. Kana akasarudza kutenga chipo kwamuri, kubvuma, asi regai kurikumbira. Uyezve, havabvumirani kwaari kubhadhara rendi yako, kana kukupai pamwedzi mari sezvo aigona chete anopedzisira kunzwa zvakafanana kutenga rudo rwenyu.
8. Iva mumwe mukadzi
Rangarirai dzinokosha mitemo yokuzvibata vabereki vako akadzidzisa imi pawaiva mbudzana? Vachiri kushanda apo kudanana. Usakanganwa tsika dzako uye murambe kushandisa mashoko anokosha 'Ndapota "uye" mazvita "kunyange kana uchiziva iye zvakanaka nechekare. Muchibata mamiriro ako uye regai kupararira makumbo enyu asvinure kufanana dude kunyange kana uri kupfeka bhurukwa. Mukadzi yakanatswa haakanganwi pamusoro izvi zvinokosha mitemo duku kunyange pashure pamakore kuroorana.
9. Ratidza kufarira kwako
Kuteerera Guy kwavo kumurumbidza chinhu vakadzi kazhinji kukanganwa kuita. Vanhu vari sezvo nehanya nemashoko akanaka uye nhengo dzomuviri sezvo isu. Usazengurira kumuudza kuti anotarira mukuru kuti hembe itsva akaisa pamusoro kunyanya kwamuri. Ratidza kufarira kwako nokuita chinhu chakanaka kwaari! Anotora iwe kuna chisvusvuro? Sei musinganzwisisi kukoka naye kunzvimbo yako ive musha wakaita chisvusvuro zvokupanduka? Munoziva chii chaanofarira makeke ake? Tarisa kuti tikundikane uye kubika akanaka Batch kwaari. Simple kasina akafanana izvi kutumira shoko. Ivo vachamuratidza kuti iwe hanya uye kuti uri achiedza, wo.
10. Usava akashama nezuva rokutanga pamusi
Rudo pakutanga kuona? Vanhu vazhinji vachatsvaka nharo kuti rinongova rudo rusiri rwechokwadi. asi, Toti kudanana kubva kokutanga Munodzika nameso pane mumwe uye mose. zvisinei, edza kurega kuwana akashama rokutanga pamusi. Unogona kutsvoda uye kumbundira, asi kuushandisa nokunonoka nguva dzose ine mikana. Sei zvimwe mungadai kutaura nezvokuva rudo uye kwete chete pabonde?